Feysal Cali Waraabe Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Dowladda Soomaaliya Amaana Ujeediyey Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Feysal Cali Waraabe Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Dowladda Soomaaliya Amaana Ujeediyey Puntland
A warsame 26 January 2014 4 April 2019
Hargeysa – Mareeg.com: Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee UCID Feysal Cali Waraabe ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, wuxuuna dhanka kale maamulka Puntland oo uu markii hore cambaarey jiray.
Feysal Cali Waraabe ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadal ka soo yeeray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in hadii dadka reer Khaatumo Satet tashteen, maamulna sameystaan ay aqoonsanayaan.
Feysal Cali Waraabe oo ka hadlayay shir xibsigiisa uga furmay magaalada Hargeysa ayaa ku andacooday in haddii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aqoonsiga Khaatumo State ay si la mid ah iyagana u aqoonsanayaan Maamulka Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu yiri.
“Xasan Sheekh waxaan leeahay hadaad Khaatumo State aqoonsatay, anagana Marka ayaa aqoonsaneynaa oo Shabellaha Hoose ah, halkaas oo dadkii lahaa ay joogaan, waxaa ku leenahay Soomaaliya iyo Somaliland ma mideyn kartidee Hawiye Maamul u sameey” ayuu ku dooday Feysal Cali Waraabe.
Dhanka kale, Feysal Cali Waraabe ayaa amaan kala dul dhacay maamulka Puntland oo uu markii aad u dhaleeceyn jiray.
“Walaalayaal waad aragtaan Puntland heerka ay gartey, Cabdullaahi Yusuf meel cidla ah ayuu ka bilaabey 1998, waad aragteen sida Garoowe noqotey, sida Bosaso noqotey, Madaxweynihii 4-aad ayaa la caleemo saarey, Soomaali oo dhan ayaa isugu tagtey dee waa dad tashadey” ayuu yiri Feysal Warabe.
Feysal Cali Waraabe ayaa sheegey in uu hanbalyo diraayo hogaanka cusub ee Puntland la doortey uuna ka shaqeeyo nabadda, sidoo kale waxa uu Isimada Puntland ku tilmaamey in ay ka wanaagsan yihiin kuwooda, weligood iyaga oo kala hadlaaya ma arkeysid.
Madaxweynaha Puntland ayuu ugu baaqey in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo soo dhicin lahaa waxa uu ugu yeeray xoolaha Muqdisho lagu boobayo, wuxuuna codsaday in wax laga siiyo kaalmada caalamku dowladda Soomaaliya.
“Umadda Soomaaliyeed ayaa lacagta iska leh, anagana waa in barkeena laynoo keenaa” ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Hadalka uu jeediyey Feysal Cali ayaa kusoo beegmay xilli ay xilkeeda weysay wasiirkii arrimaha debadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ay isku heyb yihiin Feysal Cali Waraabe.
Sarkaal Ka Tirsanaa Urur Samafal Maxalli Ah Oo Lagu Dilay Gaalkacyo